“ကောင်းရာကိုညွှန်ကြား၍ မကောင်းရာကိုတားမြစ်ခြင်း” | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
Irac Ansari Dept
“အသင်တို့တွင် အကြင်ကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရှိရပေမည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းသည် လူသားတို့အား ကောင်းရာကောင်းကြောင်းဘက်သို့ ဖိတ်ခေါ်ကြရမည်။ ထို့ပြင် ကောင်းမြတ်သောအရာများကို ညွှန်ကြားကြရမည်။ ၄င်းပြင် ထိုအဖွဲ့အစည်းသည် မကောင်းမှုများမှ မြစ်တားကြရမည်။ ဤသို့သော သူများသာလျှင် အောင်မြင်သူများဖြစ်ကြပေသည်။” ကုရ်အာန် (၃း၁ဝ၄)
“အို-မွတ်စ်လင်မ်အပေါင်းတို့ အသင်တို့သည် လူခပ်သိမ်းတို့အဖို့ ထွက်ပေါ်လာကြကုန်သော အကောင်းဆုံး အွမ္မသ် အစုအဝေးဖြစ်သည်။ အကြောင်းကား အသင်တို့သည် ကောင်းမြတ်သောကိစ္စများကို ညွှန်ကြားကြသည့်အပြင် စက်ဆုတ်ရွံရှာဖွယ်ရာများမှလည်း တားမြစ်ကြကုန်၏။ ထို့ပြင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကိုလည်း အီမာန် ယုံကြည်ခဲ့ကြကုန်၏။” ကုရ်အာန် (၃း၁၁ဝ)
“အသင်တို့အနက် မည်သူမဆို စက်ဆုတ်ရွံရှာဖွယ်အမှုပြုသည်ကို မြင်ရလျှင် ထိုအမှုကို မိမိ၏လက်ဖြင့် ပြုပြင်လော့။ ထိုသို့လက်ဖြင့် မပြုပြင်နိုင်လျှင် မိမိ၏နှုတ်လျှာဖြင့်ပြုပြင်လော့။ ထိုသို့နှုတ်လျှာဖြင့် မပြုပြင်နိုင်ပါလျှင် နှလုံးသားဖြင့်ပြုပြင်လော့။ ဤသည် အားအနည်းဆုံး ယုံကြည်မှုဖြစ်သည်။” (မွတ်စ်လင်မ်ကျမ်း)
နှလုံးသားဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းဟူသည် မိမိမြင်တွေ့ရသော စက်ဆုတ်ဖွယ်မကောင်းမှုကို ရွံရှာဖွယ်အဖြစ် နှလုံးသား၌ခံယူရမည်ကိုဆိုလိုသည်။
“အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးအား မြို့တစ်မြို့ကို မှောက်လှန်ဖျက်စီးပစ်ရန် ညွှန်ကြားတော်မူရာ ထိုကောင်းကင်တမန်က “အရှင်မြတ်၏ကျွန် သူတော်ကောင်းတစ်ဦးသည် ထိုမြို့၍ရှိ ပါသည်။ ထိုသူသည် မျက်စိတစ်မှိတ်ခန့်မျှပင် အရှင်မြတ်၏အမိန့်တော်ကို ဖီဆန်ခြင်းမပြုပါ”ဟု လျှောက်ထား၏။ထိုအခါအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က “ထိုသူအပါအဝင် အားလုံးကို မှောက်လှန်ဖျက်စီး ပစ်လော့။ အကြောင်း ကား သူသည် လူတို့ မကောင်းမှုကျူးလွန်နေကြသည်ကို တားမြစ်ရန်မဆိုထားဘိ၊ မျက်နှာအမူအရာပင် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိ”ဟု မိန့်တော်မူ၏။”
“အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် လူတစ်စု၏ မကောင်းမှုကျူးလွန်မှုကြောင့် အားလုံးကို ဖျက်စီးပစ်တော်မူမည်ကားမဟုတ်။ သို့သော် စက်ဆုတ်ရွံရှာဖွယ် မကောင်းမှုကို အထင်အရှားကျူးလွန်နေပါလျက်၊ ထိုမကောင်းမှုပြုသူကို တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်း မပြုလျှင် ထိုဒဏ်ကို အားလုံးခံကြရပေမည်။” (မွတ်စ်လင်မ်ကျမ်း)
မောင်လာနာအဗ်ဒုရ်ရဟီမ် မြင့်လွင်(ကျုံဒိုး)ရေး “အီမာန်ယုံကြည်မှု အရိပ်အောက်၌ ဘဝကိုတည်ဆောက်ခြင်း”စာအုပ်မှကောက်နုတ်ဖော်ပြသည်။
This entry was posted on February 4, 2013, in အစ္စလာမ့်ရေးရာ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← အီရန်မှ အာကာသသို့ လွှတ်တင်သည့် မျောက်ပါဝင်သော ဒုံးပျံမြေပြင်သို့ အောင်မြင်စွာ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
မြန်မာဆိုရှယ်လစ် တစ်ပါတီအာဏာရှင် ဦးနေ၀င်း၏ သမိုင်း →